थाइराईड के हो ? कसरी थाहा पाउने थाइराईड भएको ? - Nepalkakura
Home गृहपृष्ठ स्वास्थ्य थाइराईड के हो ? कसरी थाहा पाउने थाइराईड भएको ?
थाइराईड के हो ? कसरी थाहा पाउने थाइराईड भएको ?
विना कुनै परिश्रम यदी कसैको तौल अचानक कम हुनथाल्छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई थाइराइड भएको हुनसक्छ । यदी कसैमा थाइराईड ग्रन्थी अधिक मात्रामा सक्रिय छ भने, उसको तौल अचानक कम हुन थाल्छ ।
विना कुनै शारीरीक परिश्रम यदी कसैलाई घुडा तथा जोर्नीमा पिडा महसुस हुन्छ, त्यो थाइराईडको संकेत हुनसक्छ । यस्ता दुखाईले तपाईको दैनिकीमा समेत असर पार्न सक्छ । यतिसम्मकी सामान्य भारी उठाउदा समेत घुडा तथा मांसपेशीा दुखाई महसुस हुने गर्छ । कसैकसैलाई हात झनझनाउने समस्या हुने गर्छ । सका कारण हातमा सुजन हुनसक्छ ।
थाइराईडका कारण कपाल तथा छालामा समस्या उत्पन्न हुने गर्छ । जसका कारण कपाल रुखो हुने, भनmर्ने लगायतका समस्या देखिने गर्छ । त्यस्तै, छालामा पाप्रा जम्ने, छाला सुख्खा हुने लगायतका समस्या देखा पर्ने गर्छ । त्यसबाहेक, छिटो छिटो कपाल बढ्नु तथा शरीरका विभिनन अंगहरुमा कपाल पलाउनु पनि थाइराइडको संकत हुने गर्छ ।
हाइपोथाइराइडिज्मको असर व्यक्तिको यौन इचछामा समेत हुने गर्छ । यौन सम्बन्धप्रति उसको रुची कम हुुँदै जानु हाइपर थाइराईडिज्मको अर्को लक्षण वा संकेत हुनसक्छ । यसमा थकान महसुस हुन, शरीर तथा मांसपेशीमा पिडा महसुस हुन, बेचैनी हुनु पनि कारक तत्व हुनसक्छ ।
Previous articleजिपको ठक्करबाट बाघ मर्‍यो
Next articleवन मन्त्रालयलाई उत्कृष्ट मन्त्रालय बनाउने:मन्त्री प्रेम बहादुर आलेमगर